Taorian’ny Rivodoza : Laharam-pahamehana ny fanarenana ny simba -
AccueilRaharaham-pirenenaTaorian’ny Rivodoza : Laharam-pahamehana ny fanarenana ny simba
15/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy afa-bela amin’ireo loza voajanahary isika, ary ao anatin’izany ny rivodoza. Taorian’ny fandalovan’ny rivodoza AVA dia nitondra ny teny fampiononana sy ny fakaherezana ny Malagasy ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny maha ray aman-drenin’ny malagasy rehetra azy. Na izany aza dia miantso ny vahoaka tsy hiraviravy tanàna ny fitondrana fa mitraka sy miatrika ary manohy ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny firenena. « Na mbola marefo aza ny toekarentsika dia tsy maintsy harenina ny samba, ary apetraka ny vaha-olana maharitra ahafahana miatrika ny loza voajanahary sy hanamaivanana ny fiantraikany », araka ny fanamarihan’ny filoha. Efa nisy ny ezaka nataon’ny fitondrana sy ireo sampandraharaha samihafa amin’ny fiatrehana ny loza toa ny ara-pitaovana ny fampilazana sy fampitandremana isorohana ny loza ary ny fijerena ireo tra-doza. Tao anatin’izany ny fanomezana vaovao ara-potoana.
Efa nisy ny toromarika avy amin’ny filoham-pirenena amin’ny fanarenana haingana, ary tonga dia miasa avy hatrany ny sampandraharaha rehetra, ary ao anatin’izany ny famerenana haingana ny jiro, ny rano fisotro ho an’ny mponina, ary ny fanohizana ny fanadiovana tsy hiparitahan’ny valanaretina. Toa izany koa ny fanentanana ny mponina amin’ny fanarahana ireo toromarika amin’ny fisorohana ny loza mety hitranga toa ny fihotsahan’ny tany na fiakaran’ny rano.
Nitondra faisana, ary misy fiantraikany eo amin’ny toekarem-pirenena ny fahatapahan’ny làlam-pirenena maro. « Tsy maintsy harenina maika izany, am-perin’asa andro aman’alina ireo tompon’andraikitra manarina izany », hoy hatrany ny Filoha.
Tsy afa-bela tamin’ny tondra-drano sy ny tafiotra ny sekoly sy ny toeram-ponenan’ny mponina, ary maro ireo traboina noho izany. Efa nitondra ny fanohanana ara-pitaovana sy ara-tsakafo azy ireo ny fitondrana mba hiverenan’ny fiainan’izy ireo amin’ny laoniny. Nanao antso avy ny filoha amin’ny fifampitsinjovana sy hifanome tanàna, ary hanao ny ezaka hampiverina amin’ny laoniny ny fiarahamonina. Toa izany koa ny fanarenana sy ny fanadiovana. « Miantso koa aho ny mpitandro filaminana hiaro ny olona sy ny fananany manoloana ireo mpanararaotra sy mihoa-pefy eo anoloan’ny fahorian’ny sasany », hoy hatrany ny Filoha.
Anisan’ny vaindohan-draharahan’ny filoha amin’ireo tetikasa fampandrosoana ny ara-tsosialy, ka ao anatin’izany ny vary mandritra ny fotoam-pahavaratra, ny solika… « Ao anatin’ny fifampiresahana amin’io kaompania mpanafatra sy mpivarotra solika isika izao dia tsy nisy ny fiakaram-bidy tamin’ny voalohan’ny taona », araka ny fanamarihan’ny Filoha. Tsy mahakasika ny mpanjifa madinika maro an’isa ny fiakaran’ny jiron’ny Jirama farany teo.